Somaliland: Afar Askari oo xukun dil ah lagu fuliyay - BBC Somali
Somaliland: Afar Askari oo xukun dil ah lagu fuliyay
11 Jannaayo 2016
Image caption Maxkamada Somaliland.
Afar askari oo hore maxkamadaha ugu xukumeen dil kadib markii ay ku cadaatay in mid waliba si gooni ah qof u dilay, ayaa maanta ciidamada Somaliland ku fuliyeen dil toogasho ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Adan ayaa BBC u sheegay in maanta dil lagu fuliyay Cabdirizaaq Maxamed Kheyre, oo hore ugu dilay magaalada Berbera toogasho xiddigle Adam Guuleed Daahir taliyihii ciidanka birmadka boliiska ee Berbera.
Waxaa kaloo maanta dil lagu fuliyay Cabdicasiis Saciid Warsame oo hore u toogtay taliyihii guutada 93aad ee ciidanka Somaliland ee gobolka sanaag Bashe Cabdi Cali.
Xeer ilaaliyuhu wuxuu kaloo sheegay in isla maanta dil lagu fuliyay Cabdillahi Cabdi Cilmi, oo hore ugu dilay Hargeysa nin shicib ahaa oo magaciisu ahaa Cabdi Cismaan Cali.
Qofka afraad ee maanta dilka toogashada ah lagu fuliyay waa Cismaan Hirad Diiriye, oo hore ugu dilay gabolka Awdal sarkaal ka tirsanaa ciidanka Somaliland oo magaciisu ahaa Axmed weli.
Sida warku sheegayo looma oggolaan saxaafadda goobihii dilalkaasi ciidamadu ku fulinayeen. Dadweynaha ayaa si isdaba joog ah ugu boorinaayay xukuumada in la dilo qofkii qof dila haddii aan qoyska wax laga dilay cafinin.